အလ္လာဟ်က ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတဲ့အရှင် လား?ဒါမှမဟုတ် လက်စားချေတော်မူတဲ့ အရှင်လား? | Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
← Is God Really Loving and Just? ဘုရားသခင်ဆိုတာ တကယ့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ တရားမျှတခြင်းပေးပါသလား။
၃၀။အလ္လာဟ်က ကာဖရ်တို့၏ နှလုံးသားကို တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ →
အလ္လာဟ်က ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတဲ့အရှင် လား?ဒါမှမဟုတ် လက်စားချေတော်မူတဲ့ အရှင်လား?
Posted on September 25, 2011	by puresunni
၃၃။အလ္လာဟ်က ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတဲ့ အရှင်လား?ဒါမှမဟုတ် လက်စားချေတော်မူတဲ့အရှင်လား?
အမေး။ ။ကုရ်အာန်ထဲမှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာပဲ အလ္လာဟ်ရှင်က မဟာဂရုဏာတော်ရှင်ဖြစ်တယ်။
ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာ ပေးတော်မူတဲ့ အရှင်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားသလို အရှင်က ပြင်းထန်စွာ
အပြစ်ဒဏ်ပေးတော်မူမယ်ဆိုပြီးလဲ အကြိမ်များစွာ ဆိုထားပြန်ပါတယ်။အလ္လာဟ်က
ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာ ပေးတော်မူတဲ့ အရှင်လား ဒါမှမဟုတ် လက်တုံ့ပြန်တတ်တဲ့အရှင်လား.?
အဖြေ။ ။(၁) အလ္လာဟ်သည် မဟာ့ မဟာဂရုဏာတော်ရှင်တည်း။
ကုရ်အာန်ထဲမှာ အကြိမ်များစွာပဲ အလ္လာဟ်ရှင်က မဟာဂရုဏာတော်ရှင်ရယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
တကယ်ဆိုရင် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့ စူရာဟ်ပေါင်း ၁၁၄ ခုစလုံး စူရာဟ် သောင်ဗဟ် ကဏ္ဍ အမှတ် (၉)က
လွဲရင် လှပတဲ့ပုံသေနည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဗစ္စမီလ္လာ ဟိရ် ရဟ်မာ နိရ် ရဟီးမ် ဆိုပြီး “အလွန်ချစ်ခင် ကြင်နာသနား
တော်မူသော မဟာဂရုဏာတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်၏ နာမတော်ဖြင့် အစပြုပါ၏”လို့
အဓိပ္ပါယ် ရတဲ့ စာသားနဲ့ချည်း အစချီထားပါတယ်။
(၂) အလ္လာဟ်သည် ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတော်မူသော အရှင်ဖြစ်၏။
မေးထားတဲ့မေးခွန်းက အလ္လာဟ်ရှင်ဟာ ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတော်မူတဲ့ အရှင်လား။ဒါမှမဟုတ်
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာ စူရာဟ် နီစာအ် ကဏ္ဍ (၄) ပါဒ (၂၅)နဲ့ စူရာဟ် မာအိဒဟ် ကဏ္ဍ (၅)
ပါဒ (၇၄) အပါအဝင် စူရာဟ်ပေါင်းမြောက်များစွာမှာပဲ…….
“အမှန်ပင် အလ္လာဟ်အရှင်သည် အလွန်တရာ ချမ်းသာခွင့် ပေးတော်အရှင်၊
အလွန် သနားညှာတာ ဂရုဏာတော်မူသောအရှင် ဖြစ်တော်မူပေ သတည်း
(၃) အလ္လာဟ်အရှင်သည် ထိုက်သင့်သူတို့ကိုသာ ပြင်းစွာသော အပြစ်ဒဏ် ပေးတော်မူသည်။
အလ္လာဟ်ရှင်က အလွန်တရာ ချမ်းသာခွင့်ပေးတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တဲ့ အပြင် ထိုက်သင့်သူတို့ကို
တော့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လဲ ပြစ်ဒဏ်ပေးတော်မူတဲ့အရှင် ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာ မယုံကြည်သူ
တွေနဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို ငြင်းပယ်တဲ့သူတွေကို အလ္လာဟ်က ကြီးလေးတဲ့ ပြစ်ဒဏ် ပေးမယ်လို့ဆိုထားတဲ့ ပါဒ
တော်တွေ အများအပြားပဲ ပါရှိပါတယ်။အရှင့်ကိုဖီဆန်တဲ့ သူအားလုံးကို အရှင်က အပြစ်ပေးတော်မူမှ ဖြစ်ပါ
တယ်။ကုရ်အာန်ရဲ့ မြောက်များစွာသော ပါဒတော်ထဲမှာ ငရဲဘုံမှာ အလ္လာဟ်ရှင်က အရှင့်ကို ဖီဆန်သူအာလုံး
ကို ပေးမဲ့ကြီးလေးတဲ့ ပြစ်ဒဏ်အမျိုးမျိုးအစားစားကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
“အကြင်သူတို့သည် ငါအရှင်၏ သက်သေလက္ခဏာတော်များကို ငြင်းပယ်သူတို့
အဖို့ရာကား ငါအရှင်သည် မကြာမီပင် ငရဲသို့ ထည့်သွင်းတော်မူအံ့။သူတို့၏
အရေပြားများ ကျွမ်းလောင်သွားပြီးတိုင်မှာ ပြစ်ဒဏ် အရသာကို သူတို့မြည်စမ်း
ရစိမ့်သောငှာ ငါအရှင်က ထိုအစား အရေပြားအသစ်ကို လဲလှယ်ပေးအံ့။အလ္လာဟ်
အရှင်သည် အရာခပ်သိမ်းတို့ကို နိုင်နင်းတော်မူသောအရှင် နှင့် အနန္တဥာဏ်တော်
(4) အလ္လာဟ်ရှင်သည် တရားမျှတတော်မူ၏။
မေးထားတဲ့မေးခွန်းက အလ္လာဟ်ရှင်ဟာ ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတော်မူတဲ့ အရှင်လား။ဒါမှမဟုတ်
ကလဲ့စားချေတော်မူသော အရှင်လားတဲ့။အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကို ဂရုပြုမိကြဖို့ လိုတာကတော့
အလ္လာဟ်အရှင်ဟာ ဂရုဏာတော်ရှင်နဲ့ ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတော်မူတဲ့ အရှင်ဖြစ်တဲ့အပြင် မကောင်းတဲ့
သူတွေနဲ့ ဆိုးယုတ်ကောက်ကျစ်တဲ့သူတွေကို ထိုက်သင့်ရာရာ ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကို ပေးတော်မူတဲ့အရှင်
လဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအရှင်က တရားမျှတတော်မူသော အရှင်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ကုရ်အာန်ထဲမှာက စူရာဟ် နီဆာမှာ… “အလ္လာဟ်အရှင်သည် မြူမှုန်ခန့်သော်မျှ မတော်မတရား မပြုပြီ”လို့
(အလ် ကုန်အာန်- 4:40)မှာဆိုထားပါတယ်။
စူရာဟ် အန်ဗီယာမှာ ရှေ့ဆက်ပြီး ဆိုထားပါသေးတယ်။
“ငါအရှင်သည် တရားစီရင်မည့်နေ့ကြီးအတွက် သမာဓိချိန်ခွင်များကို ထားတော်မူအံ့။
သို့အတွက် အဘယ်သူသည်မျှ စိုးစဉ်းသောမျှပင် မတရားပြုခံရမည်မဟုတ်ပြီ။မုန်ညင်း
စေ့ တစ်စေ့စာမျှဆိုလျှင်လည်းထည့်တွက်မည်သာတည်း။ငါအရှင်၏ စစ်ဆေးချက်နှင့်ပင်
(၅) ဥပမာ စာမေးပွဲမှာ စာခိုးချတဲ့ ကျောင်းသားကို ခွင့်လွှတ်လိုက်တဲ့ ဆရာလို……..
စာမေးပွဲဖြေဆိုနေတဲ့ အချိန်မှာ ကျောင်းသားတစ်ဦးက ခိုးချပြီးဖြေမယ်။အတန်းစောင့် ဆရာက ဒါကို
လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ဖမ်းမိသွားတယ်။ဆရာဖြစ်သူက “ငါဟာ အင်မတန် သနားဂရုဏာကြီးတဲ့ဆရာပဲ။ခွင့်လွှတ်
ချမ်းသားကြီးတဲ့ဆရာပဲ၊တပည့်ရေ ဆက်သာ ခိုးချကွာ”ဆိုပြီး ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ထား။စာမေးပွဲအတွက် အပတ်
တကုတ် ကြိုးစားလာခဲ့ကြတဲ့ တခြားကျောင်းသား/သူ တွေကတော့ ဒီဆရာကို အကြင်နာရှိတဲ့ဆရာ ဂရုဏာကြီး
တဲ့ဆရာဆိုပြီး ခေါ်ကြမှမဟုတ်ဘူး။မတရာတဲ့ဆရာလို့ပဲ ခေါ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမဟုတ်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ သွား
ပြီး သနားကြင်နာ ပိုနေတဲ့ဆရာရဲ့ လုပ်ရပ်က တခြားကျောင်းသားတွေကိုပါ ခိုးချဖို့ အားပေးအားမြှောက်ပြုရာ
ရှိသမျှ ဆရာအားလုံးကသာ အကြင်နာကြီး ဂရုဏာကြီးပြီး ကျောင်းသူ ကျောင်းသားအာလုံးကို စိတ်ကြိုက်
ခိုးချခွင့် ပေးသွာမယ်ဆိုရင် ဘယ်ကျောင်းသားကမှ စာကို ကြိုးစားနေစရာ လိုတော့မှာမဟုတ်ဘူး။စာမေးပွဲမှာ
အားလုံးက ဘာသာစုံအမှတ်အပြည့်နဲ့ ဂုဏ်ထူးချည်းထွက်ကုန်ကြဖို့ပဲရှိတယ်။စာတွေ့ရေးဖြေ စာမေးပွဲမှာ
ကျောင်းသားတိုင်းက ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင်ကုန်ကြမယ်။ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတေ့ ဒီကျောင်းသားတွေ
ဟာ ဘဝမှာ အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်။စာမေးပွဲစစ်ပေးရတဲ့ အလုံးစုံသော ရည်ရွာ်ချက်ကလဲ အချည်းအနှီး အရာ
(၆)ဤလောကီဘဝသည် တမလွန်အတွက် စမ်းသပ်စစ်ဆေးရာ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီလောကီဘဝဟာ တမလွန်အတွက် စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်တစ်ရပ်ပဲဖြစ်တယ်။ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်လာ
စူရာဟ် မုလ်က် ထဲမှာ အခုလိုလာရှိထားပါတယ်။
“အသင်တို့အနက် အဘယ်သူသည် အကျင့်အမူအားဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကို
စမ်းသပ်အံ့သောငှာ အကြင်အရှင်မြတ်သည် သေခြင်းနှင့် ရှင်ခြင်းတို့ကို ဖန်ဆင်း
တော်မူခဲ့၏။ထိုအရှင်သည် အလွန်တရာခန့်ငြားတော်မူသောအရှင် တော်မူသော
အရှင် အဖန်တလဲလဲ ခွင့်လွှတ်တော်မူသောအရှင်တည်း”(အလ် ကုရ်အာန်-67:2)
(၇)အလ္လာဟ်အရှင်က အားလုံးကို ခွင့်လွှတ်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မပေးဘဲ ရှိခဲ့ပါမူ အရှင်းအား
တကယ်လို့သာ အလ္လာဟ့်ဘက်က လူတိုင်းလူတိုင်းကိုသာ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ
အရေးယူ အပြစ်မပေးတော့ဘူးဆိုရင်တော့လဲ လူသားတွေက ဘာကြောင့် အလ္လာဟ်ရဲ့ အမိန့်ပညတ်တွေ
ကို နာခံနေကြရတော့မှာလဲ။ဘယ်သူမှ ငရဲကိုသွားရတော့မှာ မဟုတ်တာကိုတော့ ကျွန်ုပ်ကလဲ သဘောကျ
တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ ဒီလိုသာဆိုရင်တော့ ဒီကမ္ဘာကြီးက လောကငရဲခန်းကြီး ဖြစ်သွားမှာပေါ့။
လူသားအားလုံးကသုခဘုံကို သွားကြရမယ်ဆိုရင်ရော ဒီကမ္ဘာကို လူသားတွေလာရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်
နဲ့ အသုံးဝင်မှုကဘာလဲ။ဒီလောကီကမ္ဘာကိုလဲ တမလွန်အတွက် စမ်းသပ်ရာ တစ်ခုလို့ မခေါ်ဆိုနိုင်တော့ဘူး
(၈)အလ္လာဟ်က သတိ သံဝေဂရသူကိုသာလျှင် ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးမှာဖြစ်သည်။
အလ္လာဟ်ရှင်က လူတစ်ဦးက အမှန်တကယ် သတိသံဝေဂရမှသာ ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတော်မူမှာ
ဖြစ်တယ်။ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်လာ စူရာဟ် ဇုမရ် ကဏ္ဍ (၃၉) ပါဒ (၅၃-၅၅) မှာ အခုလို လာရှိထားပါတယ်။
“ပြောလော့…အို မိမိကိုယ်ကို ထင်တိုင်းကျဲကြကုန်သော ကျေးကျွန်တို့၊
အလ္လာဟ်၏ ဂရုဏာတော်မှ မျှော်လင့်ချက် မမဲ့ကြကုန်နှင့်။အသင်တို့၏
အရှင်သည်ကား အလွန်တရာ ခွင့်လွှတ်ရှင်တည်း။မဟာ ဂရုဏာတော်
“အသင်တို့ထံ ပြစ်ဒဏ်မဆိုက်မီမှာ အရှင့်ဘက်သို့ နောင်တသံဝေဂနှင့်လှည့်ကြ။
အရှင်၏ အလိုတော်ကို ဦးညွှတ်ကြကုန်။အချိန်လင့်သွားလျှင်မူ အသင်တို့သည်
မည့်သည့် အကူအညီကိုမျှ ရရှိကြမှာ မဟုတ်ပြီ။”(အလ် ကုရ်အာန်-39:54)
“ထို့အပြင် အသင်တို့သည် ပြစ်ဒဏ်က အသင်တို့ထံ ရုတ်ခြည်း ဆိုက်ရောက်မလာ
မီအလျှင် အသင်တို့၏ အရှင်သခင်ထံမှ အသင်တို့ထံ ထုတ်ပြန်ပို့ချတော်မူထားရာ
အကောင်းဆုံးသောလမ်းစဉ်ကို လိုက်နာကြကုန်။”(အလ် ကုရ်အာန်-39:55)
-ပထမအချက်က ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရပ်က မှားနေတာကို လက်ခံရပါမယ်။
-ဒုတိယအချက်က ဒီလုပ်ရပ်ကို ချက်ချင်း ရပ်တန့်ပစ်ရပါမယ်။
-တတိယ်ချက်က ဒါကို နောက်ထပ် ဘယ်တော့မှ မကျုးလွန်ရတော့ပါဘူး။
-နောက်ဆုံး စတုတ္ထအချက်ကတော့ တစ်စုံတစ်ဦးအပေါ်ထိခိုက်နစ်နာစေမှုပေါ်ခဲ့ရင် ဒီအတွက်
ဒေါက်တာဇကိးရ်နိုက်ခ် ရဲ့ စာအုပ်ကို (ဝါးခယ်မ မောင်မင်းနိုင်) ဘာသာပြန်သော (စောဒက နှင့် အဖြေ၂)
မေးခွန်း နံပါတ် ၃၃